Wariye Soomaali ah oo Muqdisho lagu dilay - Sabahionline.com
Wariye Soomaali ah oo Muqdisho lagu dilay
Maajo 25, 2012
Rag hubaysan oo aan la aqoonsan ayaa Khamiistii (24-kii May) dilay Axmed Caddow Caashuur oo ahaa wariye, iyo war-xiriiriye ka tirsan Shabakadda Wararka Shabeelle, xilli uu ku sugnaa meel u dhow gurigiisa.
Walaac xooggan oo laga qabo ammaanka saxafiyiinta Soomaaliya
Dilkii suxufiga ayaa keentay walaac laga qaba ammaanka suxufiyiinta
Midowga Qaranka Saxafiyiinta Soomaaliyeed (NUSOJ) ayaa si wayn u cambaareeyay dilka Caashuur, oo ah wariyihii lixaad ee sannadkan gudihiisa la dilo iyo kii saddexaad ee laga dilo Shabeelle.
“Weerarrada soo badanaya ee lagu hayo dadka ka shaqeeya warbaahinta ee ka socda Soomaaliya waxa ay nagu hayaan walwal aad u wayn…Ma ay jiraan sababo siyaasadeed ama diineed oo lagu banneeysan karo dilka saxafiyiinta,” ayuu yiri Burhaan Axmed Daahir oo ah madaxweynaha NUSOJ, isaga oo dawladda Federaalka Ku-meel-gaarka ah ugu yeeray in ay qaaddo tallaabo dagdag ah oo ay ku baarayso dambiga kuwii ka dambeeyayna ay ku horkeento caddaaladda.
Ma jirto koox sheegatay mas’uuliyadda dilka wariyaha.
Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Danjire Boubacar Gaoussou Diara, ayaa cambaareeyay weerarka.
“Looma dul-qaadan karo tallaabooyinka caynkan oo kale ah ee ay ku dheehan yihiin dabmiilenimada iyo axmaqnimadu,” ayuu Diarra ku yiri war-murtiyeed uu soo saaray.
Hay’adda ilaalisa xorriyad-qowlka saxaafadda ee Saxafiyiinta aan Xudduudda Lahayn ayaa ku tilmaantay Soomaaliya waddanka ugu badan Afrika ee lagu dilo saxafiyiinta.